Home News Toogasho ka dhacday Magaalada Baladweyne!!
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi lagu dilay askari ka tirsanaa Ciidanka dowlada iyo Qof shacab ahaa.
Dilkan ayaa ka dhacay Xaafadda Howlwadaag ee Baladweyne,waxaana rag hubeysan ay toogteen Askariga ka tirsanaa Ciidanka dowlada Soomaaliya ee ku sugan Magaaladaas iyo Ruux shacab ahaa.
Dad deegaanka ayaa waxaa la sheegay in goobta uu dilka ka dhacay ay tageen,iyagoo halkaasi ka qaaday Meydka qofka shacabka ahaa iyo Askariga la dilay.
Sidoo kale waxa uu inoo sheegay in howlgalkan uu yahay mid lagu raadinayo kooxihii ka dambeeyay dilkii ka dhacay Baladweyne,kuwaasi oo baxsaday.